တက်တော့မယ့် “မီတာခ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တက်တော့မယ့် “မီတာခ”
Posted by myanmarcitizen on Dec 14, 2011 in Copy/Paste | 15 comments
“လျှပ်စစ် မီတာခများအား နောက်ထပ် တစ်ဆ ထပ်တိုးမည်” ဆိုတဲ့ သတင်းကို first 11 မှာဖတ်လိုက်ရလို့ ဒီ post ကိုတင်လိုက်တာပါ။ အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့ 25ကျပ် က 50ကျပ်။ စီးပွားရေးသုံး 50ကျပ် က 100ကျပ် ကောက်ခံတော့မှာပါ။ အကြောင်းရင်းက အရှုံးပေါ်လို့ပါတဲ့ခင်ဗျ။
ပထမ ရထားခ တိုးကောက်တယ် အရှုံးပေါ်လို့တဲ့။ မေးစရာတစ်ခုရှိပါတယ် အရှုံးပေါ်တိုင်း ပြည်သူတွေကိုပဲ လည်ပင်းလိုက်ညှစ် တော့မှာလား ??? အရှုံးမပေါ်တဲ့ ဌာနတွေ (တကယ်တော့မြတ်နေတာပါ) ကကော မြတ်လို့ဆိုပြီး အလကားပေးတာတို့ ၊ လျော့ချတာတို့ လုပ်ကြပါလား။ ဆက်သွယ်ရေးဆို ၁၅ သိန်းနဲ့ အရင်ရောင်းစား ရလိုက်မယ့် ငွေတွေ။ ၁၅ သိန်းနဲ့ ၀ယ်နိုင်တဲ့သူတွေကုန်သွားရင် … ၅သိန်းနဲ့ရောင်းမယ် … ၅သိန်းနဲ့ တော်တော်များများ ရောင်းပြီး ၃သိန်းနဲ့ အားလုံးကို ရောင်းစားမယ်။ တစ်ရက် တစ်ရက် ဖုန်းဆက်ခ ဘယ်လောက်ရလိုက်မလဲ။ အဲလိုရလို့ ဖုန်းဆက်ခကို ချပေးသလား … ပိုပြီးဈေးတက်ကောက်လိုက်သေးတယ် ။ ၁၅ သိန်းသမားလဲ ဒီဈေး ၅သိန်းလဲ ထူးမရှားနား။ နောက်ပြောပါသေးတယ် မြန်မာက ဖုန်းဆက်ခ ဈေးအသက်သာဆုံးတဲ့ .. အဲ့ဒါလူကြီးပြောတာနှော် (ပြောတာမှ တကယ့်နေရာမှာပြောတာ) အော် … ဘယ်လိုတွေးပြီးပြောလဲတော့မသိဘူး။ (တခြားတိုင်းပြည်ကို သေချာလဲသွားကြည့်ကြပါအုန်း)။ သူပြောတော့ line man ဆိုတဲ့ ငတိလေးတွေကထပ်ပြော … တကယ်မသိတဲ့ပြည်သူတွေက အရမ်းပဲတန်နေသလိုလို့ … ။
အရှုံးပေါ်တိုင်းသာ တိုးပြီး အခကြေးငွေယူကြတမ်းဆိုရင်။ ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုတာကော ရှိအုန်းမလား။ စရိတ်မျှပေး ဆိုပြီးရေးထားတာတွေကကော ရေးစရာလိုအုန်းမလား။ ကိုမိုးသီးဇွန် site မှာတစ်ခါ သိပ်မကြာသေးခင် က တွေ့လိုက်တယ်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးက ဘဏ်နာ ငွေ ဘယ်လောက် ရှာပေးခဲ့တယ်ဆိုလား ? သေချာတော့မမှတ်မိတော့ဘူး (အော်သူလဲမြတ်နေတာကိုး)
မြင်ရ ကြားရတာတွေက တစ်ခါတစ်ခါတော်တော်ခံရခက်ပါတယ် ဗျာ။ ထပ်ပြီးရေးချင်သေးတယ် .. အချိန်လဲမရတော့ဘူး … post ကိုဖတ်မိတဲ့ အကို ၊ အမ ၊ ညီငယ် ၊ ညီမငယ် လေးများ ၀ိုင်းပြီး ဆွေးနွေးပေးကြပါအုန်း။
မီးသာ ၂၄နာရီ မပျက်မကွက် ပေးမယ် ဆိုရင်ဖြင့် အဆိုပါ တက်နှုန်းလောက်ကို ကျေနပ်ကြမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ရယ်ပါလေ
အင်း ခက်တယ် ၊ ခက်လိုက်တာ ၊ ခက်နေပြီ ၊ အခု မှ တကယ်ခက်ရပါပီ ၊
ဒီထက်ခက်တာတောင် ဒီလောက်မခက်တော့ပါဘူး ခင်ဗျာ ။
တက်တော့လဲ ပေးရအုံးမှာဘဲပေါ့နော့။မြန်မာလူမျိုးတွေက သူဌေးတွေမို့ အားလုံးထက်တော့ တတ်နိုင်ပြီးသား
ပါဘဲဗျာ။ပြောကို မပြောချင်ပါဘူး စိတ်ကုန်တယ်
တက်စရာရှိတာလဲ တက်ပေါ့…။ အရှူံးပေါ်နေတဲ့ ဘာမှ သောက်လုပ်မဖြစ်တဲ့ ဌာနတွေတော့ ဖြုတ်သင့်နေပြီနော်………..။
ဘယ်ရှုံးလိမ့်မတုန်းဗျာ ကျုပ်တို့တွေမှာသာ ကုန်းရုန်းရှာထားသမျှ ပေးကမ်းလိုက်ရနဲ့
စုမိ ဆောင်းမိကို မရှိဘူး သူတို့တွေပဲ သောက်သောက်လဲ မြတ်နေတာ
ဝေပုံကျ လုပ်ပြီး အဝေမတည့်တိုင်း ရှုံးတယ်ပြောနေမှာ ။
ရှုံးလို့တိုးကောက်တယ်ဆိုလဲကောက်ပေါ့။ ပေးရုံပဲ။ ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။ သူများနိုင်ငံတွေလို ပြည်သူတွေ အတွက်ပြန်သုံးပေးဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်နော်။ တကယ်ပြည်သူတွေအတွက်အကြိုးရှိရှိပြန်သုံးမယ်ဆို လို့ကတော့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာပေးပါတယ်။ ဒါမှလဲနောင်ကိုယ်ပြန်ရမဲ့အလှည့်ကျတော့အားမနာရဘူးပေါ့။ သို့သော် အရင်အကျင့်မပျောက်လို့ကတော့ သဲထဲရေသွန်တာကမှစိုကျန်ခဲ့အုံးမယ်။
တွေးကြည့်တော့ အိမ်သုံး မီတာခ ၁သောင်းကျရင် နောက်လ ၂သောင်း ကျဖို့ သေချာသွားပြီ။
ဟင်းချက်ဖို့တောင် မီတာနဲ့ မချက်တော့ပဲ ဂစ်နဲ့ ပြောင်းချက်ရမလားတွေးနေတာ..
ဒါနဲ့ စကားမစပ်.. အိမ်တွေမှာ သုံးတဲ့ စပလိန်ကွိုင်နဲ့ မီးဖိုတွေ နဲ့ အခုခေတ်ပေါ်တဲ့ မီးဖိုပါးပါးလေးတွေ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး မီတာခ သက်သာမလဲ.. အခုခေတ်ပေါ်တဲ့ မီဖို ပါးပါးလေးတွေကတော့ အပူအားပြင်းလွန်းလို့ အိုးသိပ်ကပ်လို့ သိပ်မသုံးဖြစ်ဘူး။
မကြီးဆူးရေ.. စပလိန်ကွိုင်တွေကတော့ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ မီးအားကို ဝပ်ဆင်းသွားတာပဲ တော်တော်ဆွဲတယ်.. မသက်သာဘူး ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဂက်စ်မိုးဖိုပြောင်းသုံးဖို့စုံစမ်းနေပြီ ဝယ်မဆိုဆိုရင် အခုနေဝယ်ထားမှ.. နောက်မီတာခတက်တော့မှ လိုက်ဝယ်ရင် ဈေးတွေမြောက်သွားမှာ.. ကိုယ်လိုတွေးတဲ့သူတွေကလဲအများကြီးလေ.. လုပ်စားကြမယ့် ကုန်သည်တွေကလဲ ဂွင်ကောင်းပဲ ဂက်စ် မီးဖိုတွေတော့ ရောင်းကောင်းဦးမယ်.. နောက်လဲကြားရဦးမယ် ဘယ်မြို့နယ်မှာ တော့ ဂက်စ်အိုးကွဲလို့ ဘယ်နှယောက်လျှောသွားပြီဆိုတာမျိုးတွေ..
ဒါနဲ့ သံလိုက်မီးဖိုတွေကရော မီးအားတော်တော်ဆွဲလား… ဆင်တူယိုးမှာလုပ်ထားတဲ့ ၁၀၀၀၀ ကျော်တန်တွေက သံလိုက်မီးဖိုမဟုတ်ဖူး… ကွိုင်နဲ့လာတဲ့ဟာတွေပဲ သူလဲ မီးအားတော်တော်ဆွဲတယ်… သံလိုက်မီးဖိုတော့ မသုံးဖူးသေးလို့မသိဘူး.. သုံးဖူးသောသူများ အတွေ့အကြုံလေး ပြောပြကြပါဦး…
ရှေ့ဆက် အရှုံးမခံနိုင်တော့တာလည်း နားလည်ပါတယ်…
မူမှန်သော ဈေး တရပ်ဖြင့် တော့ ရောင်းချပေးစေလိုပါတယ်….
premium price ပေးထားလျင်တော့ premium quality ပြန်လည် ဖြည့်ဆည်းပေးပါ..
၁.volt 220 အပြည့် ထွက်စေချင်ပါသည် …
၂.50Hz(လက်ရှိ ) ပြည့်စေလိုသည် 60Hz(သွားမသွား လည်း သိချင်ပါသည်)
၃. မီး လုံးဝ (လုံးဝ) မပျက်စေဖို့ တာဝန်ယူ ပေးပါ။
၄. မီးအား စောင့်တက် စောင့်ကျ လို့ အိမ်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ ပျက်ဆီးတာကို အာမခံ ထားလို့ရပါသလား..
ထိခိုက်နစ်နာမှု ရှိလျင် တိုင်ကြားလို့ရပါသလား …
ဒါလေးတွေပါ ထည့်တွေးကြပါဗျာ ……
အင်း ၀ိုင်းဆွေးနွေးတော့ကော မီတာခက မတက်တော့ဘူးလား။ ဘာမှမသုံးလဲ ထိန်းသိမ်းခတို့ မီတာခတက်နေတာတို့ အမြဲကြုံနေရတာ ခုတောင် ဈေးတက်နေတာ ဘာကို ထပ်တက်ချင်သေးလို့လဲမသိဘူး။ တော်ပြီး ဖယောင်းတိုင်လုပ်ငန်းပဲ ပြောင်းလုပ်တော့မယ်။ အယ်ဒီဆင်ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဈေးလျှော့ပေးတယ်ဆို ဟုတ်သေး… တီထွင်တဲ့သူတောင် ဒီလောက် မီတာခလို့ မသတ်မှတ်သွားဘူး။
မော့ ( စ်) ရဲ့ပျက်လုံး သတိရမိပါတယ်….
အလကားရတဲ့ မန်ကျီးရွတ်ခူးရောင်းတာ ရှုံးတယ်တဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ မန်ကျီးရွတ်တက်ခူးနေတုန်း မန်ကျီးပင်အောက်မှာ ချွတ်ထားတဲ့ဖိနပ် လူခိုးသွားလို့..တဲ့..။
35,70 ဖြစ်မယ် ပြောပြန်ပြီ။ မီးကတော့ ခနခန ပြတ်ပြတ်နေပြီးတော့။ ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ ၁၀၀၀ လဲယူသေးတယ်။ သူတို့ပဲထိမ်းသိမ်းခလဲယူသေးတယ် ကျွန်တော့မီတာ cover seal မရှိလို့ဆိုပြီး ရုံးကို ခေါ်ပြီးဒါဏ်ရိုက်သေးတယ်ဗျား။ ကြာတော့ကြာသွားပြီ တော်တော်ကြီးကို။ အဲ့မတိုင်ခင်က cover seal ဆိုတာဘာမှန်းတောင် ကျွန်တော်မသိဘူး။ ရုံးရောက်တော့ လူကြီးနဲ့တွေ့တယ်။မြို့နယ်မန်နေဂျာထင်တယ်။ ကျွန်တော်ကမေးတယ် အဲ့ဒါပြတ်တာ ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိလဲလို့ ။ သုံးတဲ့သူမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပဲ။ ဒါဆိုခင်ဗျားက ဘာဖြစ်လို့ လစဉ် မီတာထိမ်းသိမ်း ခယူနေတာလဲလို့ ။ ဒီကောင်ပါးစပ်ပိတ်သွားတယ်။ မီတာကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ ယူတဲ့သူက တာဝန်မရှိပဲ ပေးရတဲ့သူကတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့လဲခက်ပြီ။ အဲ့တုန်းက 25ကျပ်ထင်တယ်ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခက။ ဒါနဲ့ပဲ ဒါဏ်ကြေး 6000 ကျော်ဆောင်ခဲ့ရပါကြောင်း။(မီးဖြတ်တာမှမခံနိုင်တာ)
ကျွန်တော့ဦးလေး ကအိမ်ဆိုင်ဖွင့်တယ် သေးသေးပါ။ အဲ့ဒါကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးယူမယ်ပြောတယ်။ အဲ့လိုမကောက်ခံစေချင်ရင် တစ်လကို ၅၀၀၀ ထောင်ပေးရမယ်ဆိုပြီး ပေါ်တင်တောင်းလို့ ၅၀၀၀ တော့မလုပ်ပါနဲ့ ၃၀၀၀ ပဲယူပါဆိုပြီးပေးနေရတယ်။ ဒုက္ခ ဒုက္ခ
သြော် သူတို့လဲ တိုးခွင့်ရှိမှာပေါ့
မီတာခတွေ တက်မယ့်ဆိုတာ လက်တလောမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ … လေးလရပ်ဆိုင်းတယ်ဆိုလားပဲ ကြားရတယ် … ။